Abantu Abaphantse Babe Yi-400 Baye Batyelela Ikomkhulu Lehlabathi Elitsha LamaNgqina KaYehova
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiBhulu IsiCroatia IsiCzech IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
ENEW YORK—Kulo Mgqibelo uphelileyo, amaNgqina KaYehova aye avula ikomkhulu lawo lehlabathi elisandul’ ukwakhiwa eWarwick, eNew York. UTroy Snyder, ovelela ikomkhulu, uthi: “Siba neendwendwe ezimalunga neziyi-1 150 ngosuku ezize kubuka ikomkhulu lethu. Kodwa kwezi mpelaveki zimbini zigqithileyo besifuna ukubulela abamelwane bethu abangengomaNgqina kunye nabo abaye basixhasa xa besisakha.”
NgoMgqibelo bebeyi-395 abantu abebekho xa bekuvulwa ikomkhulu, ibingabahlali abayi-205 kunye nabathengisi nabakhi abayi-190. Iindwendwe ziphiwe ukutya, zabukiswa isakhiwo kangangemizuzu eyi-40, zabukela ividiyo emva koko yaba yimibuzo neempendulo.
UChristopher Gow, ohlala kufutshane neTuxedo Park eNew York, okwiBhodi Yedolophu Ecebisa Ngemithi.
UChristopher Gow, ohlala kufutshane neTuxedo Park, wathi: “Ndandinomdla kakhulu kwaye ndakuvuyela ukufumana isimemo sokuya kutyelela isakhiwo. Ndandisazi ngolu lwakhiwo, kodwa indlela ababesebenza ngayo ngocwangco, yayingathi akwenzeki nto.”
Ekubeni amaNgqina akhe ikomkhulu lawo kufutshane nonxweme lweSterling Forest State Park’s Blue Lake, uninzi lwabahlali luthe belufuna ukuzibonela ukuba kwakhiwe njani.
UGqirha Richard Hull, owayesakuba nguprofesa wembali kwiYunivesithi yaseNew York ohlala eWarwick nokwangumbhali-mbali wedolophu.
UGqirha Richard Hull, owayesakuba nguprofesa wembali kwiYunivesithi yaseNew York, ohlala eWarwick nokwangumbhali-mbali wedolophu, uthi: “Ndifunde ngale ndawo iminyaka engaphezu kweyi-50. AmaNgqina enze umsebenzi omhle wokwakha kwangaxeshanye ecingela nezilwanyana ezihlala kule paki.”
Emva kokubuka isakhiwo, uMnumzan’ uGow, okwiBhodi Ecebisa Ngemithi eTuxedo Park wathi: “Yonke into isemgangathweni, amaNgqina enze umsebenzi omhle. Indlela esakhiwe ngayo esi sakhiwo ingumzekelo onokuxeliswa.”
Emva kokubuka, iindwendwe zazibukela imiboniso emithathu kwiindawo zemiboniso ezingentla nangezantsi kwendawo yokwamkela iindwendwe. Imiboniso emibini ibonisa imbali nangendlela amaNgqina KaYehova azenza ngayo izinto ngoku ehlabathini lonke, ngoxa umboniso wesithathu uneeBhayibhile ezinqabileyo nemizobo yeBhayibhile yakudala.
UGqirha Hull wagqibezela ngokuthi: “Kusetyenziswe izinto zezi mini xa bekusakhiwa esi sakhiwo. Ndiyabona ukuba kwacetywa kakuhle xa kwakuza kwakhiwa. Kusafuneka ndiye nasemyuziyam kodwa ndiyafuna ukuphinda ndibuye.”
UMnumzan’ uSnyder uthi: “Sifuna ukubulela ngokukhethekileyo abo baye basixhasa baza basamkela ukufika kwethu apha. Yiloo nto siye samema abamelwane bethu abangengomaNgqina ukuba beze kolu vulo lwesi sakhiwo.” Abo baye bafumana izimemo okanye abamelwane abangakwazanga ukuza kulo Mgqibelo uphelileyo, bangeza kulo Mgqibelo uzayo, ngoAprili 29, ukususela ngo-10:00 kusasa ukuya kutsho ngo-4:00 emva kwemini.
Ukukhusela Izilwanyana Zasendle Nendalo EWarwick